Intetho ye "Auto" Prefix esetyenziswe kwiBiology
Fumana okunye malunga namazwi afana ne-Autoimmunity, Autonomic, kunye ne-Autochthon
Isiqalo sesiNgesi "auto-" sithetha uqobo, olufanayo, oluvela ngaphakathi, okanye ngokukhawuleza. Ukukhumbula lesi siqalo, esasisuka kwigama lesiGrike elithi "auto" elisentsingiselo "uqobo," cinga ngokulula amagama aqhelekileyo owaziyo ukuba ukwabelana ngeqhosha elithi "auto-" lifana nemoto (imoto uqhuba yona) okanye ngokuzenzekelayo ( inkcazo yento ethile ngokuzenzekelayo okanye esebenza yedwa).
Khangela ezinye iilwimi ezisetyenziswe kwimigaqo yezinto eziphilayo eziqala ngesiqalo esithi "auto-."
I-Autoantibodies ziyi- antibodies eziveliswa ngumzimba ohlasele iiseli zezilwanyana kunye nezicubu . Izifo ezininzi ezizimela ngokungafani ne-lupus zibangelwa yi-autoantibodies.
I-Autocatalysis i-catalysis okanye ukukhawuleza kwempendulo yamakhemikhali ebangelwa enye yeemveliso zempendulo ezenza njenge-catalyst. Kwi-glycolysis, okuyi-glucose yokwenza amandla, enye inxalenye yenkqubo inikwe amandla yi-autocatalysis.
I-Autochthon ibhekisela kwizilwanyana zasemthonyeni okanye izityalo zommandla okanye owaziwa ngaphambili, abemi belizwe. Abantu base-Australia baseAustralia baqwalaselwa njengama-autochthons.
I-Autocoid ithetha ukugcinwa kwangaphakathi kwemvelo, njenge- hormone , eveliswa kwicandelo elinye lomzimba kwaye lichaphazela enye inxalenye yendalo. Isiqulatho sithathwe kwisiGrike esithi "acos" esichazela ukukhululeka, umzekelo, kwisiza.
I-Autogamy yigama lokuzichumisa ngokweziqu ezifana ne-pollination yeentyatyambo nge- pollen yayo okanye ukuhlanganiswa kwamagetetti okubangelwa ukwahlula kweselula esisodwa somzali esenzeka kwezinye iifungi kunye namaprotocolzo.
Igama elithi autogenic liguqulela ngokoqobo ukusuka kwisiGrike ukuba lithetha "ukuzakhela" okanye kuveliswa ngaphakathi.
Ngokomzekelo, ungasebenzisa uqeqesho lwe-autogenic okanye u-self-hypnosis okanye ukudibanisa kwisilingo sokulawula ukushisa komzimba wakho okanye uxinzelelo lwegazi.
Kwizinto ze-biology, ukuzimela komzimba kuthetha ukuba inyama ayikwazi ukuqonda iiseli zayo kunye nezicubu , ezinokubangela ukuphendula kwamagciwane okanye ukuhlaselwa kwezi ndawo.
Ukugqithiswa kwe-Autolysis kukutshatyalaliswa kweeseli ngeenzyme zayo; ukuzigaya. I- lysis isisulu (nayo ivela kwisiGrike) ithetha "ukukhulula." NgesiNgesi, isisombululo "irisysi" sinokuthetha ukubola, ukuchithwa, ukutshabalalisa, ukukhulula, ukuphula, ukwahlukana okanye ukwahlukana.
I-Autonomic ibhekisele kwinkqubo yangaphakathi eyenzeka ngokungenanto okanye ngokukhawuleza. It isetyenziswe kubomi bendalo ngokucacileyo xa ichaza inxalenye yenkqubo ye-nervous elawula imisebenzi yomntu engabandakanyeki, inkqubo ye- nervous autonomic system .
I-autoploid ibhekisele kwiseli esineekopi ezimbini okanye ngaphezulu zeqoqo enye yama- chromosomes . Ngokuxhomekeke kwinani leekopi, i-autoploid ingafakwa ngokwezigaba ze-autodiploids (iiseti ezimbini), i-autotriploids (iiseti ezintathu), i-autotetraploids (ezine iiseti), i-autopentaploids (iisethi ezintlanu), okanye i-autohexaploids (iiseti ezintandathu), njalo njalo.
I-autosome yi- chromosome engeyona i- chromosome yesini kwaye ibonakala ngeendidi kwiiseli ze-somatic.
I-chromosomes yesondo iyaziwa njenge-allosomes.
I-autotroph ingumzimba onokuzondla okanye okwazi ukuvelisa ukutya kwayo. Isixelongo "-troph" esivela kwisiGrike, sithetha "ukutya." I-algae ngumzekelo we-autotroph.
Intshayelelo kwimithetho emikhulu yeFizikiki
Kutheni ULwandle Olufile Lufile (Okanye Ngaba?)
Imbali yeCyber ​​Rock
UMies van der Rohe - Yintoni i-Neo-Miesia?
Ngaphakathi kweWinsor neNewton Paint Factory
Iimida zeMida phakathi kweMfazwe yombutho
Isingeniso kwiNkcazelo yamaNyaka
Ikhompyutheni: I-Poker Hand Isiteketiso
Ngaba i-Sony Kanye Yakha I-Fake Film Critic ukuze ibulele ii-Movie zayo?
Ngaba uJohn Kerry ongumYuda okanye umKatolika?
Iifayili ze-Aesop eziMnandi